I-villa enelanga elinechibi lokubhukuda - I-Airbnb
I-villa enelanga elinechibi lokubhukuda
Saint-Mamet, Occitanie, i-France
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Ekaterina
Imizuzu embalwa uhamba ngezinyawo ukusuka ezindaweni zokugeza ezishisayo zase-Bagnères de Luchon, endaweni ethule, i-villa enhle, ebanzi futhi ekhanyayo eklanywe ngomakhi.
Umnyango, igumbi lokuhlala eliholela egumbini lokudlela elinekhishi. Igumbi lokulala lokuqala elinombhede ophindwe kabili phansi. Isitezi sokuqala sibekelwe ukulala ne-master suite enobhavu we-Jacuzzi kanye neshawa, igumbi lesithathu lokulala, igumbi lokugezela, indlu yangasese ehlukile.
Indawo yokungena inendlu yokulala. Indawo yokuhlala inegumbi lokuhlala, kanye negumbi lokudlela elinekhishi elihlome ngokuphelele.
Amafasitela amaningi asethekwini abheke eningizimu nasempumalanga amasimu abheke eningizimu nasempumalanga, ingadi nedamu lokubhukuda. Umbono omuhle weVenasque uvuleka ohlangothini oluseningizimu. Zonke izindawo zokuhlala zivumela ukuxhumana nendawo yangaphandle.
Uphahla lwe-cathedral egumbini lokuhlala lunikeza umuzwa wesikhala. Iziko elimaphakathi lidala ukuphila futhi lifudumeza ubusuku bakho basebusika.
Igumbi lokuqala elinombhede ophindwe kabili liphansi. Isitezi sokuqala sibekelwe indawo yokulala enegumbi lokulala elikhulu elinobhavu we-Jacuzzi kanye neshawa. Bese kuba nekamelo lokulala elinombhede wabantu ababili, igumbi lokugezela elihlukile elinobhavu wokugeza kanye neshawa, kanye nendlu yangasese ehlukile. I-mezzanine iyindawo yokuphumula noma yokufunda ngokubuka i-Venasque. Indlu ifakwe kahle. Ifenisha, okokulala nezinto zokusebenza kusha futhi kusezingeni eliphezulu.
Le ndawo iboleka abathandi bokunethezeka nokuzola. Ngaphandle kokukhohlwa ubumnandi be-Pyrenean gastronomy, iyisimo esivumela ubumnandi bemvelo, siqale ngokubhukuda ku-swimming pool.
Uzovela endaweni efanele ukuze uzilolonge imisebenzi kuwo wonke amazinga. Umoya ohlanzekile, uhamba eLuchon, izindlela zokuhamba izintaba, ihlathi, ukushushuluza, kanye ne-hydrotherapy.
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint-Mamet namaphethelo